I-Semalt ifaka i-Cool Web Crawler kunye ne-Auto Post Post kwi-Wordpress
Iwebhusayithi yeWindowsPress kaninzi kangangoko ufuna. Ingaphinde ifake umxholo kwiblogi yakho ngokuzenzekelayo.
Le iplagin isebenze ngakumbi kuneyona ininzi yokucoca idatha isofthiwe, kwaye nayo inezinto ezininzi eziphambili, kwaye ezibaluleke kakhulu zichazwe ngezantsi:
Iifrape kulula ukuyisebenzisa kwaye ayifuni naziphi na izakhono zoqeqesho okanye amava. Enyanisweni, yenzelwe amava amaninzi omsebenzisi. Awudingi naluphi na i-API. Udinga kuphela ukucwangcisa isicelo sakho sokuqhawula, kwaye siya kusebenza kwi-autopilot 24/7 njengebhobhothi - ventilatore da soffitto in promozione.
Isebenza nemigangatho emncinci, ngoko ke bonke ababonelela ngemicimbi bayayixhasa. Kwakhona, uhlala ekulungele ukuya. Ayifuni naluphi na uhlobo olude lokucwangcisa.
Isicelo singakwazi ukuphatha umxholo kwiiwebhsayithi ezininzi ngaphandle kweyonke imida kwixesha elinye. Kuya kuba yinzuzo enkulu kuwe ukuba ufuna ukukhangela umxholo kumaphepha angama-100 ewebhu nsuku zonke. Udinga kuphela ukuyibeka kanye, kwaye konke oko. I-bot iya kuqhubeka isebenza 24/7 ngasemva. Iwebhusayithi yakho iya kuhlala isesikhathini.
Ikhono lokuthumela umxholo kwiblogi yakho
Enye into ebethayo yale iplagin ikwazi ukuyifometha umxholo okhutshiwe kwaye uyithumele kwiblogi yakho kuxhomekeke kwimibandela yakho. Yingakho inezinketho ezininzi zokuzibhokoxa ngokuzenzekelayo. Ukuba unabantu abaye batyelela iblogi yakho rhoqo ngolwazi, kwesi sixhobo, ibhulogi yakho iza kuhlaziywa kaninzi njengoko ufuna.
Ixhasa zonke iindidi zezixhobo
Inkqubo ingasetyenziselwa nayiphi na ifowuni. Unokufikelela kwideshibhodi yakho kwi-smartphone yakho, ithebulethi, kunye nePC yakho. Ngaloo nto, unokwenza umxholo wokuhamba.
Unako ukukhipha isicatshulwa kwimifanekiso
Ngamanye amaxesha, ezinye iifoto zinomxholo ofakiwe kuwo njengalebula. Ngokomzekelo, ukukhusela ukwebiwa kwezinto, ezinye iisayithi zibhale yonke imifanekiso yazo. I-Scrapes inokukrazula umfanekiso kwaye isuse yonke itekisi kuyo.
Emva kokuhlaziya idatha yeenombolo, kunakho ukwenza izibalo ezithile zeemathematika kubo, kwaye kungabonisa isiphumo. Oku kuya kunceda ukwakha amanani amaninzi. Ngokomzekelo, ukuba iwebhusayithi yakho ibonisa ixabiso langoku le-stock, ungathanda ukubala kwaye ubonise ukunyuka kwepesenti okanye ukunciphisa kwixabiso lesitokisi apho amaxabiso atshintsha.
Ngoko ke, ufuna kuphela ukuyichaza kwi-plugin, ayiyi kukhangela kuphela amanani amatsha kodwa kubalwa kwaye ibonise ukutshintsha kwepesenti.
Ukuhambelana nazo zonke iiprosesa eziphambili
Iyahambelana nazo zonke iiphequluli ezinkulu ezifana ne-Microsoft Edge, i-Google Chrome, Safari, ne-Mozilla Firefox. Awunaso nayiphi na umcimbi wokuhambelana.
Naphezu kwezinga lokusebenza kakuhle, lihlaziywa rhoqo. Yayisungulwa ngomhla wama-23 kuNovemba 2016, kwaye ihlaziywe ngamaxesha amaninzi. Enyanisweni, ixesha lokugqibela lihlaziywe ngowama-23 ku-Oktobha, ngo-2017.
Ekugqibeleni, i-plugin ifanelekile kwiimeko ezahlukeneyo zokusetyenziswa. Ezinye zeemeko zokusetyenziswa zilandelayo:
Ukutsalwa kolwazi olutsha lwemali;
Ukutsalwa kwesimo sezulu esandula;
Ukutsalwa kwezihlomelo zengqesho ezizimeleyo;
Ukutsalwa kweevenkile kunye neendawo zabo;
Ukuchonga ulwazi malunga namaziko eenqwelo-moya kunye neeshedyuli zabo zendiza;
Enyanisweni, ingasetyenziselwa imisebenzi emininzi yokuqhawula. Imisebenzi echazwe ngasentla yincinci encinane yento engayisingatha ngayo. Kwakhona kubalulekile ukubonisa ukuba zonke iinkalo ezikhankanywe ngasentla azizona kuphela iimpawu zeSrape. Ngoko, zama ukucinywa namhlanje, kwaye ungeke ufune enye ithuluzi lewebhu elitsha kwakhona!